स्वास्थ्य Archives - Page 32 of 55 - Samudrapari.com
गाईको पेटमा लुकेको छ एड्सको उपचार !
काठमाडौं - अमेरिकी शोधकर्ताका अनुसार एचआइभीबाट लड्नका लागि बनाइने सूइमा गाइले निकै सहयोगी भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिरक्षाको रुपमा यी जनावर लगातार यस्ता विशेष एन्टीबडिजको उत्पादन गर्दछ जसमार्फत् एचआइभीलाई निको पार्न सकिन्छ । कप्लेक्स र ब्याक्टेरियायुक्त पाचन तन्त्रका कारण गाइमा प्रतिरक्षाको क्षमता धेरै विकसित हुने गर्दछ । अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिचयुट अफ हेल्थले यो नयाँ जानकारीलाई उत्कृष्ट बताएको छ । एचआइभी एक घातक प्रतिद्वन्द्वी हो र यसले यति चाँडो आफ्नो स्थिती परिवर्तन गर्छ कि भा...
काठमाडौं - आजभोलिको जीवनशैलीका कारण व्यक्तिहरू बारम्बार बिरामी परिरहेका छन् । आधुनिक मानिसहरूको खानपिनको बानी परिवर्तन भएको छ । जंक फूड खाने बानीले गर्दा आधुनिक मानिसहरूको पाचनप्रणाली नै बिग्रिसकेको छ । पाचन राम्रो बनाउनुछ भने त्रिफला खान थाल्नुस् । यो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उपचार पद्धति हो । अमला, हर्रो र बर्रो मिलेर त्रिफला बन्छ । यसको सेवनले के फाइदा हुन्छ .... ? कब्जियत त्रिफलाले लामो समयदेखि जमेको कब्जियतबाट छुटकारा दिलाउँछ । यसले शरीरको आन्तरिक फोहरलाई बाहिर निकालेर सफा गर्छ । पाचनलाई ...
रेविजविरुद्धको सुई लगाउने नयाँ तरिका सुरु : शुक्रराज ट्रपिकल
काठमाडौं– शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनावरले टोकेपछि लगाउने रेविजविरुद्धको सुई लगाउने नयाँ तरिका सुरु गरेको छ । अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले आइतबारदेखि छालाभित्रसम्म मात्रै लगाउने तरिका अपनाइएको बताउनुभयो । पहिले पाखुराबाट भित्र मासुसम्म लगाउने गरिन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, “यो तरिका विदेशमा पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ, हामीले पनि धेरै अघि सुरु गर्ने सोच बनाए पनि विभिन्न कारणले सुरु गर्न सकिएको थिएन ।” अस्पतालका अनुसार पहिलेको तरिकाले १ एमएलको सुईले एक जनालाई हुन्थ...
काठमाडौं - न्युयोर्क विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिनका माइक्रोबायोलोजिस्ट फिलिप टियर्नोको भनाइमा भिजेको (नुहाएर जिउ पुछेको) तौलिया एउटा जीवित ‘अग्र्यानिज्म’हो । यस्तो, तौलियामा जीवाणू हुर्कन र वृद्धिका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण (जस्तोः पानी, तापक्रम र पर्याप्त अक्सिजन) हुन्छ । ओसिलो ठाउँमा ‘माइक्रोब्स’को बास हुन्छ । यसै कारण टियर्नो भन्छन्, ‘कुनै पनि तौलिया धुनुअघि तीन पल्ट मात्र प्रयोग गर्नु ठीक हुन्छ । र त्यो पनि हरेक पल्ट प्रयोगपछि तौलिया पूर्ण रुपमा सुख्खा (सुकेको) हुनुपर्छ ।’ तौलिय...
जानी राखौंः यस्ता छन् हरियो पालुंगोका औषधीय गुण
काठमाडौं - हरियो सागको कुरा गर्दा पालुंगोको उल्लेख भइहाल्छ । यो त रामवाण नै हो भन्दा हुन्छ । पालुंगो नियमित रूपमा खाने मानिसले कहिले पनि अस्पताल जानुपर्दैन । पालुंगोमा शरीरका लागि आवश्यक अनेकौं अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, प्रोटीन, भिटामिन ए र आइरन तत्त्व पाइन्छन् । यसमा भएको बीटा केरोटिन नामक भिटामिनले आँखा बलियो बनाउँछ । पालुंगोले रुखो छालालाई नरम बनाउँछ अनि आँखामा चमक ल्याउँछ । पालुंगोको पेस्ट अनुहारमा लगाउनुभयो भने सबै दागधब्बा हराउँछन् । छालामा पीलो वा दाना पलाएमा पालुंगोका पातलाई पानीमा उमाल...
काठमाडौं - त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसी साउन ९ गतेदेखि आमरण अनसन बस्नुहुने भएको छ । आईओएमलाई स्वायत्त बनाउन तथा त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न दिएको अल्टिमेटम सरकारले गुजारेको भन्दै डा. केसीले अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको हो । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले साउन ९ गते अपराह्न ४ बजे अनसन सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले ८ बुँदे माग अघि सार्नुभएको छ । जसमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आफूहरुले दिएको सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नु पर्ने पहिलो माग छ...
काठमाडौं - पानीबाट फैलने रोग ८० प्रतिशत हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार अनभिज्ञ छैन । तर पनि उपत्यकामा खानेपानी बिक्रेताले गर्दै आएको लापरबाहीलाई रोक्न सरकारले खासै ठोस कदम चालेको छैन। सरकारकै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गरेको खेलबाडका कारण वर्षेनि हजारौंको संख्यामा मानिस झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, जन्डिस, निमोनियाजस्ता थुप्रै रोगको शिकार बन्दै छन्। उपत्यकामा खानेपानी प्रदुषित भएकै कारण जुनसुकै समय हरेक खालका नयाँ नयाँ रोगको त्रास फेलले गरेको विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ। हाल...
काठमाडौं - हामीले स्वस्थ्य रहनका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । शरीरलाई आवश्यक क्यालोरि मिलाएर खाएको खण्डमा अनेक खालको रोगका समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसकालागि खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । खानालाई सन्तुलित गर्न सकियो र नियमित रुपमा व्यायाम गर्न सकिएको खण्डमा धेरै किसिमका रोगहरुबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । हर्ट अट्याक, सुगर लगायतका समस्या समाधानमा खानपानको समेतत विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । बिहान-बेलुकाको खानामा हरियो साग हुनु अत्यन्त लाभदायी हुन्छ । दैनिक कम्तीमा एकपटक फलफूल खा...
रुपन्देही – रुपन्देहीमा सर्पले टोकेर १५ जनाको ज्यान गएको छ । एक वर्षको अवधिमा उपचारको लागि आएका सर्पदंशका बिरामीमध्ये लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा १२ जना र भैरहवाको भिम अस्पतालमा ३ जनाको ज्यान गएको हो । भैरहवामा रहेको भिम अस्पतालमा १ हजार ८ सय ३ जना सर्पदंशका बिरामी उपचारको लागि आएका छन् । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीका अनुसार अस्पतालमा १ हजार ३ सय सर्पदंशका बिरामी मध्ये १२ जनाको ज्यान गएको हो । अहिले पनि अस्पतालमा ७ जना सर्पदंशका बिरामीको उपचार भइर...
काठमाडौं - सामान्यतया हामी जीवनको एक तिहाइ समय बिछ्यौनामा (बेड)मा बिताउँछौँ । यस्तो महत्वपूर्ण बिछ्यौना छिट्टै नै अनेकौँ खालका ‘ब्याक्टेरिया’ र ‘फङ्गस’को ‘बोटानिकल गार्डेन’ बन्छ भन्छन् न्युयोर्क विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजिस्ट फिलिप टियर्नो । टियर्नोले एउटै तन्ना (बेडसिट) लामो समय लगातार प्रयोग गर्दा वा छिट्टै नधुँदा तन्नाको मुजा परेको वा खुम्चिएका ठाउँमा उत्पन्न हुने माइक्रोस्कोपिक जीव (ब्याक्टेरिया, भाइरस र जीवाणू)ले हामीलाई बिरामी बनाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘यस्ता अदृश्य रोगव्य...